Qorshaha kooxda Barcelona kaga aaddan Antoine Griezmann oo la ogaaday… (Miyuu bixi doonaa?) – Gool FM
Qorshaha kooxda Barcelona kaga aaddan Antoine Griezmann oo la ogaaday… (Miyuu bixi doonaa?)
(Barcelona) 25 Luulyo 2020. Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday qorshaha kooxda Barcelona kaga aadan mustaqbalka weeraryahankeeda reer France ee Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann ayaa xilliyadii la soo dhaafay oo dhan lala xiriirinayay inuu ka tagayo garoonka Camp Nou inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Griezmann ayaan ku soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga doonayay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda Barcelona, kaddib markii ay ku qarash gareeyeen qiimo dhan 120 million euros oo ay kaga soo qaateen naadiga Atletico Madrid.
Inkastoo Antoine Griezmann uu dhaliyay 15 gool, isla markaana uu caawiyay 6 gool kale, haddana waxaa hoos u dhacay rikoorradii uu kooxda Atletico Madrid ka soo sameeyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, kaddib markii uu dhaliyay 21 gool, sidoo kalena uu caawiyay 10 gool kale.
Haddaba Wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa warbixintiisan shaaca kaga qaaday in Barcelona aysan ku fekereynin inay iibiso Antoine Griezmann, isla markaana ay iska diiday inay dhageysato dalab kasta ee laga soo gudbiyay, waxayna ku wargalisay dhamaan kooxaha xiiseynaya inay la saxiixdaan inuusan iib ka aheyn.
Laakiin warbixinta ayaa waxay intaas ku sii dareysaa in xaalada ay isbedeli doonto bisha September ee soo aadan iyo kaddib marka uu dhamaado tartanka Champions League, waxayna kooxda diyaar u noqon doontaa inay dhageysato dalabyada ka imaan doono laacibka, haddii ay jiraan dalab soo jiidasho leh, albaabada ayaa waxay u furnaan doonaan inuu baxo.